Ny fiteny aostrôneziana dia ireo fiteny tenenina eto Madagasikara, any Azia Atsimo Andrefana, ao amin'ny ranomasimbe Pasifika ary any Taioàna. Ny isan'ireo fiteny aostrôneziana manerana izao tontolo izao dia eo amin'ny 1 268, izany hoe vondrom-piteny faharoa amin'ny resaka isam-piteny, aorian'ny fiteny nizerôkongoley.
Ny anarana hoe aostrônezia, izay avy amin'ny teny latina hoe auster (midika hoe "rivotra atsimo") sy ny teny grika hoe νῆσος / nêsos (izay midika hoe "nosy") dia midika ara-bakiteny hoe "nosin'ny rivotra atsimo".
Miisa roa ny zana-tsokajin'ny fiteny asotrôneziana: ny fiteny formôzana, izay tenenina ao Taioàna, sy ny fiteny malaiô-pôlineziana any amin'ny toerana hafa ankoatr'i Taioàna. Ny nipoiran'ireo fiteny ireo dia tokony ho tao amin'ny tendrony atsimo atsinanan'i Sina Atsimo na Fôrmôzy (Taioàna) izay mbla ahitana mponina miteny aostrôneziana. Ireo fiteny melaneziana, izay tokony ho isan'ny fiteny aostrôneziana, dia tsy nafangaron'ny mpahay fiteny noho ny antony ara-bolonkoditra.
Raha jerena ny toetr'ireo fiteny ireo dia hita fa azo sokajina roa araka ny fisampanan-teny sy fanakambanan-teny ao aminy:
Ny fampisampanan-teny amin'ny alalan'ny fanampiana tovona sy tovana sy tsofoka ary tsirinteny sara-droa (tovona sy tovana miaraka) amin'ny fototeny,
Ny fisian'ny teny verindroa,
ary ny rafi-peo izay tsotsotra (tsy ahitana renifeo sy zanapeo firy, tsy dia ahitana na tsy misy tamba-drenifeo sarotra tononina, fehezanteny ahitana rindram-peo, sns).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_aostrôneziana&oldid=995362"
Dernière modification le 29 Jolay 2020, à 09:04
Voaova farany tamin'ny 29 Jolay 2020 amin'ny 09:04 ity pejy ity.